ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁၃)
ကဲ စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး တွေးကြည့်ပါအုံး တွေးမနေနဲ့ ငေးမနေနဲ့ ရတုန်း ယူထားလိုက် ဟာား ဟား အရှိန်တက်သွားတယ် ပြောရင် သီချင်းဆိုတဲ့ ဆီရောက်ကုန်ပါတယ်.... ဒီစာသားလေးအတိုင်းအမြန်ဆုံး ယူထားလိုက်ပါ.. ကျုပ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကို ကျုပ်ပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်..
ကျုပ်ကို ဟိုဘာသာမကောင်းဘူး ဒီဘာသာမကောင်းဘူး ကျုပ်ကို လာပြောရင် ကျုပ်စဥ်းစားမည့် မဟုတ်ပါ. ကျုပ်က messenger ပါ ကျုပ်ဒီမဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးဖို့ သက်သက်ပါပဲ... ကျန်တာ ခင်ဗျားတို့ ဘုရားမဲ့ ၀ါဒသမားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာပြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူး။
ရှင်းပါတယ်နော်.... ထက်ထက်ရှင်းမပြပါရစေနဲ့ (ထက်ထက်မိုးဦးရှင်းပြမည့်ဟု ဆိုခြင်းမဟုတ်) စကားတွေ အများကြီး ပြောရင် ကိုယ်တော်ချော မောတယ်ကွယ်... အောက်ကတော့ ပီတာကျော်ရဲ့ C box ထဲမှာ aung aung ဆိုတဲံသူငယ်ချင်းတယောက်က အောက်ကအတိုင်း ဒီလိုဆိုတယ်ဗျာ.. ပထမသူစကားအရ ကျုပ်သဘောမပေါက်သေးဘူး နောက်မှ သူဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်တော့တယ်.
4 Jan 10, 07:19 PM
aung aung aungthiha2009@gmail.com: ရှိုင်တွာန်ချောရေ မင်းတို့ဂေါတာမကျမ်းမှာလဲ ရန်သူကို သတ်ဖြတ်ပစ်တာပဲ တဲ့လား မြောက်များလွန်းလှတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကျမ်းတစ်ဆူဆူမှာ လူမပြောနှင့် သက်ရှိ(တိရိစ္ဆာန်)တကောင်ကာင်ကိုပင်4Jan 10, 07:20 PM
aung aung aungthiha2009@gmail.com : သတ်ဖြတ်ခိုင်းတာတွေ့ရင် ပြောပါ ညွှန်ပြပါ ယခုချက်ချင်း ဘာသာမဲ့ ခံယူလိုက်ပါမယ် မပြနိုင်လို့ကတော့ မင်းဟာရှိုင်တွာန် (သို့) ရှိုင်တွာန် ကကြားဖြတ်ဝင်တွယ်ပြီး မွေးလာတဲ့သားဖြစ်ရမယ်
သူပြောချင်းတာက ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းမှာ သတ်ဖြတ်ခိုင်းတာ ပါလားတဲ့ဗျာ..... ဤနေရာမှာ ဖြေရမှာက အကြောင်းနှစ်မျိုး ဖြစ်နေတော့ ကျုပ် နောက်ဆုံး လူအများသိတဲ့ လက်ညိုးလိုက်ဖြတ်တဲ့ အင်္ဂုလိမာလ အကြောင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်.... အင်္ဂုလိမာလ ဆိုတာ မိတ်ဆွေတာကြားဖူးမှာပါ...
အဲဇာတ်ကြောင်းကိုလည်း ကြည့်ပါအုံး ရက်စက်တဲ့ဗျာ ဆရာ့ရဲ့ ကျေးဇူးကို ဆပ်ချင်းလို့ လူပေါင်း ကိုးရာ ကိုးဆယ် ကိုးယောက်ကို သတ်ပြီး လက်ညိုးတွေ လိုက်ဖြတ်တယ်တဲ့ (တောင်းတဲ့ ဆရာကလည်း ဘာအကြံနဲ့တောင်းလဲ မသိပါ..... ကြက်ခြေထောက်အရိုးလို့ အချဉ်ရည်နဲ့ တို့စားဖို့နဲ့ တူပါတယ်ဗျာ) သတ်တဲ့ငနာကလည်း မငြင်းဘူး မိစ္ဆာတွေဆိုတော့လည်း အပြန်အလှန် ကျေးဇူးသိတတ်နေကြတာပေါ့နော်..
ဆရာကလိုချင်တဲ့ဆိုတာနဲ့ လူအသတ်တောင် သတ်ကြတာကို ဗုဒ္ဓ၀င်(သိုင်းဝတ္တူ)စာအုပ်က သင်ကြားထားကို မိတ်ဆွေများ တွေ့ရမှာပါ.... အာမယ်လေး ကြောက်ဖို့တော့ ကောင်းလိုက်တာ သူများအသတ်ကို သတ်တဲ့ ငနာ ဘာဖြစ်လည်း မိတ်ဆွေတို့ သိချင်မှာပေါ့ ပါဏာတိပါတကံ မကျရောက်ရပဲ အကုသိုလ်တွေက အဟောသိကံ ( အချည်းနည်း) ဖြစ်၍ ကျွတ်တမ်းဝင်သွားတယ်တဲ့ဗျာ.. အိုး ရက်စက်လိုက်တာ.. ဂေါတာမရဲ့ အာကုသိုလ်တ၇ားကို ခံယူလိုက်တာနဲ့ ကျွတ်တမ်းက ၀င်သွားတယ်တဲ့ဗျာ ဟားဟား တတ်လည်း တတ်နိူ်င်ပါ့ပေ... .
ဂေါတာမဆိုတဲ့ ကောင်က ဘာကောင်လဲဆိုတာ ကျုပ်ရှင်းမပြတော့ဘူး ရှေ့မှာ ကျုပ်ပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်. ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူပေါင်း ကိုးရာ ကိုးဆယ် ကိုး ယောက်ကို သတ်တဲ့ လူ ရှိတောင်မရှိဘူးဗျာ... ရက်စက်ပါပေ့ ဒါကို ရှက်ရာကောင်းမှန်းမသိ သွန်သင်သင့်လော့ မသွန်သင့်လော့ မစဉ်းစား သူတောင်းစားကျောင်းကနေ လော်စပီကာ နဲ့အော်အော်နေတော့ မိတ်ဆွေတို့ကြားဖူးမှာပေါ့ ဒီလိုသင်ကြားချင်းဖြင့် မင်းတို့ကြိုက်သလောက်လူသတ် ကြိုက်သလောက် အပြစ်လုပ် ဘယ်သူမှ မကြည့်နဲ့ အင်္ဂုလိမာလ ကိုပဲကြည့် ဘယ်လို အကျွတ်တမ်းဝင်သွားလဲဆိုတာကို အဲဒီလိုမျိုး သင်ကြားကြတာကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်...
အဲလို သင်ကြားရုံမကဘူး အသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းအောင် အင်္ဂုလိမာလသုတ် ကိုပါရွတ်ဆိုဖို့ အားပေးအားမြှောက် သင်ကြားထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..... ဗုဒ္ဓဘာသာက လူသတ်ဖို့ မအားပေးဘူးလို့ ဆိုလို့ ပါ ဆိုပြနေရတာပါဗျာ.... (ကိုယ်တော်ချောက အဆိုတော်မဟုတ်ဘူးနော် တွေ့ရင်ဆိုခိုင်းနေမှာစိုးလို့ ဒီလိုပြောလို့ ငနာဂတုံးဘုန်းကြီးတွေကို သွားသတိရမိတယ်.... ငနာဘုန်းကြီးများ သင်္ကန်းခြုံပြီး အချစ်ရေးကိုယ်ကြောင့် ဆိုတဲ့သီချင်းကိုအာဗြဲပြီး အော်ဆိုနေတာကို စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ တကယ့်ကို သဘောကျမိပါသေးတယ်ဗျာ)
Posted by messenger at 5:34 PM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, လူသတ်ခိုင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဂေါတာမသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိူင်လျှင် ဒီဘလော့အား လုံးဝဖျက်ဆီးပေးမည်.....
ယခုမျက်မြင်ဘဝတွင် တွေ့ရသောကြက်၊ဘဲ၊ငါး၊ပုစွန်များသည် လူများ၏နည်းပညာဆေးထိုး သားမျိုးပေါက်မူများဖြင့် များစွာတိုးပွါးလျက်ရှိသည် ကြက်၊ဘဲ၊ငါး၊ပုစွန်များကို လူတို့ စားသုံးဖို့ရာ သန်းပေါင်းရာချီမျိုးဖေါက်ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ဤကြက်၊ဘဲ၊ငါး၊ပုစွန်များဟာ အဘယ်ဘယ်သို့သော် အကုသိုလ်မျိုးကြောင့် ကြက်၊ဘဲ၊ငါး၊ပုစွန် ဘဝကိုသာအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲ ရရှိနေရပါသလဲ နတ်မင်း၏အလိုဆန္ဒအရကြောင့်လား အကုသိုလ်အပြစ်အကျိုးကြောင့်လား လူတို့၏နည်းပညာဖြင့် လိုရာပြုလုပ်နေခြင်းလားဆိုတာ အဖြေလေးတော့ပေးပါ.... ဤနေရာတွင် ဂျုးတို့၏ ယေဟောဝါဘုရား ၊ ခရစ်ယာန်တို့၏ ထာဝရဘုရား ၊အစ္စလာမ်တို့၏ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ပြောဟောဆိုမိန့်ချက်သည် အလွန်မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရသည် ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းကို သင်တို့လက်ထဲသို့အပ်ထားလိုက်ပြီ ဆိုသောစကားတော်သည် အလွန်မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ အတိတ်ဘဝအကုသိုလ်၊ကုသိုလ်ကံကြောင့် ဘယ်ဘဝရောက်ရတာ ဒီဘဝရောက်ရာဆိုတာ ရူးကြောင်နိုင်လွန်းသောစကားသာဖြစ်သည်ကို ဤအမူအရာထောက်ရူ၍ သိရပါသည်။
စာရေးသူ ဘုန်းကြီး အာဏာရှင်ပပျောက်ရေး ဒို့အရေးလို့ ဘာဖြစ်လို့ ပြောခဲ့လဲ??ဆိုရင် စာရေးသူအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာဆရာတို့နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်.... လေးစားသောအားဖြင့် ဆရာဆိုတဲ့စကားပဲ ပြောဆိုရတယ် တခါတလေဦး ဆိုရင်ဦး ၊ ကိုဆိုရင်ကို နာမည်အရှေ့မှာတပ်ခေါ်ရုံနဲ့ ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး.... ဒါပေမဲ့ငနာဂတုံးများစကားပြောတဲ့အခါ ဂတုံးများက အရမ်းအထက်စီးဆန်တယ်ဗျာ.... သူတို့ပြောသမျှကို မှန်ပါ့ဘုရား တင်ပါ့ဘုရား(ယောင်္ကျာလေးများကတော့ တင်ပါ့ပေါ့ မိန်းခလေးများကတော့ တင်ပြပါပေါ့)နဲ့ ခွေးသူခိုးတွေ နောက်ကွယ်သင်္ကန်းခြုံပြီး ဖာချနေတဲ့ကောင်တွေကို (ဖာမချပါဘူးလို့ ညင်းခဲ့ရင် နောက်ကွယ်မှာ ကိုယ့်လက်နဲ့ ကိုယ်/ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် သူများသားမယားကို ပြစ်မှားကြတာပဲ) ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကို တရိုတသေနဲ့ ဆက်ဆံနေရတာ အရမ်းကိုအထက်စီးဆန်လှပါတယ်.... ဒါကြောင့် စာရေးသူအနေနဲ့ ဘုန်းကြီးအာဏာရှင်စနစ် ပပျောက်ရေး....ဒို့အရေးလို့ သုံးနှူုံးခြင်းမှာ မမှားနိုင်ပေ....
ဗုဒ္ဓ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ ဤသုံးပါးကို ရှောင်ကျဉ်ကြလော့။
အိုး သင်္ကန်းခြုံဂတုံးတို့ အမှားကိုမြင်၊ အမှန်ကိုသိ၍ ဗုဒ္ဓ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ ဤသုံးပါးကို ရှောင်ကျဉ်ကြလော့။ ဗုဒ္ဓသည်လည်း လိမ်ညာကောက်ကျစ်ရာ၊ ဒုက္ခသည်လည်း ဝမ်းနည်းပူဆွေးရာ၊ အနတ္တသည်လည်း မတည်မြဲရာ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဤသုံးပါးအကျိုးကို ဒို့မြန်မာပြည်ကြီး ခံစားနေရတယ်မဟုတ်လား သင်္ကန်းခြုံဂတုံးတို့။ အဘယ့်အချိန်ကာလပတ်လုံးထိ လိမ်ညာသောလမ်းမှမရုန်းထွက်ဘဲ ရှိနေအုံးမှာလဲ??? အိုး အဆွေသင်္ကန်းခြုံဂတုံးတို့ သင်တို့သည် ရှေးဦးစွာ မိမ်ိ့လက်နှင့်မိမိ့ဝမ်းစာကို ရှာပါစေ။ မိမ်ိ့ဝမ်းစာအတွက်ပင်လျှင် သူတောင်းစားကဲ့သို့ ဝမ်းစာရှာနေသော သင့်တို့အား ကျွန်ုပ်အဘယ်ကဲ့သို့ ယုံကြည်ရမည်နည်း။အလှူဒါနပြုသူများက သင်တို့အား ငွေအလှူကိုပြုပြီးသည့်တိုင်မှ မတင့်တိမ်၊ မရောင့်ရဲနိုင် ထပ်၍ပင် စားဖွယ်သောက်ဖွယ်အလှူများကိုပင် ထပ်၍တောင်းနေကြသည့်မှာ သင်တို့သည် သူတောင်းစားထက်ပင် ပို၍ဆိုးနေကြသည့် မဟုတ်လော့။ သင့်တို့နေ့စဉ်ရက်ဆက် စားသောက်နေရသော် အစားအသောက်ပင်လျှင် မိမိ့လက်နှင့် မချက်မပြုတ်နိုင်။ ထို့ကြောင့် အပျင်းတကာအပျင်းဆုံးသူများသည် သင်တို့ပင် ဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည် ကျွေးမွေးလှူဒါန်းကြသော်၊ အစားအသောက်ပင်လျှင် ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချလျက် အသား၊ငါးများမသတ်ရ ဥပဒေကို ကိုယ်တိုင်ချမှတ်လျက်နဲ့ပင် ကျွေးမွေးသည့်အခါ မြိန်ရေရှက်ရေ စားသောက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ကျွေးသောသခင့်လက်ကို ပြန်ကိုက်သော်၊ ခွေးနှင့်ပင် ခိုင်းနှိုင်းစရာ ရှိသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လည်း သုခချမ်းသာဘုံကို ရရှိနိုင်
ဂေါတာမသည် နောက်ဆုံးသောဘဝမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျန်ရှိသော သူ့၏ဘဝပေါင်း လေးအသချေ၊င်္ ကမ္ဘာတစ်သိန်းမှာ သူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အိုး.... သင်္ကန်းခြုံဂတုံးတို့ ဤအမူ့အရာကို ဆင်ခြင်၍ သင်တို့သည့်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် မဟုတ်ဘဲ၊ ချမ်းသာသုခဘုံကို ရရှိခံစားနိုင်သည်။
သူတောင်းစားကို ကိုးကွယ်လို့ သူတောင်းစားဖြစ်တာ မထူးဆန်းပါဘူး
ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအရပ်ရပ်မှာ ကျွန်သဖွယ်၊ သူတောင်းစားသဖွယ် နေထိုင်နေရတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဂေါတာမကုလားကိုယ်တိုင်က အိမ်တကာလှည့်ပြီး သူတောင်းစားလို တောင်းစားနေမှတော့ သူ့ကို ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ သူတွေသူတောင်းစားသဖွယ် ၊ ကျွန်သဖွယ်ဖြစ်နေတာ မထူးဆန်းပါဘူး။
သဘာဝက ဒါတွေနားလည်ပါမလား???? ဒီကောင်ကဆိုးလို့ သွားငရဲပြည် ဒီကောင်က တော်လို့ သူတောင်ကောင်းဖြစ်လို့ သွား နတ်ပြည်ဆိုတော့ ဒါက ခင်ဗျာတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ၊ သဘာဝကြီးက ခင်ဗျာတို့ဆန္ဒအတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးရမလား???? သဘာဝတရားဆီမှာ လူတွေရဲ့ တနေ့စာတနေ့စာ မှတ်တမ်းစာအုပ်ရှိလို့လား???? တကယ်တော့ ဂေါတာမက သူဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို သဘာဝပါဆိုပြီး လျှောက်ပြောနေတာနဲ့ မတူဘူးလား??? ဘယ့်သူက နတ်မင်းရာထူးတို့ သိကြားမင်းရာထူးတို့ ဿသနာ့စောင့်နတ်ရာထူးတို့ကို ခန့်ပေးထားတာလဲ???? သဘာဝကြီးက (Auto) အော်တို သူ့အလိုလို မင်းက နတ်မင်းလုပ် ဟိုပုကွကွနဲ့ကောင်က သိကြားမင်းလုပ်ဆိုပြီး အော်တို ဖြစ်လာတာလား???? စောက်ခွက်ချွန်ချွန်က ဿသနာ့စောင့်နတ်လုပ် ဆိုပြီး သဘာဝက အော်တိုဖြစ်ခိုင်းလိုက်တာလား??????
ကျနော်ဖတ်ရှု၍ ဗုဒ္ဓကျမ်းမှရရှိသော ရသနှစ်မျိုး
တစ်ခုက အကြည်တော်ဝတ္ထူဖတ်ရှု၍ ရရှိသော ဟာသရသမျိုး၊ တစ်ခုက သိုင်းဝတ္ထူဖတ်ရှု၍သော်၎င်း၊ သိုင်းကားကြည့်၍ ရရှိသော တော်တော်ရွှီးတဲ့သိုင်းဝတ္ထူပဲ/သိုင်းကားပဲ ဆိုတဲ့ အံ့သြမူရသမျိုး၊ ထိုရသမျိုး နှစ်မျိုးကို ရရှိခံစားရပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့ကော အဘယ့်ကဲ့သို့ ရသမျိုး ရရှိပါသနည်း။
ကမ္ဘာမကျော်လိုက်တဲ့ ၀မ်းပိတ်ဆေး (1)
ကျွန်တော်ပြောချင်သော စကားအချို့  (1)
ကိလေသာကြွယ်ဝသော ဂေါတာမ (1)
ကျတော်၏ မိတ်ဆွေများသို့ (1)
ခင်းဗျားတို့ပဲမှားသလား ကျတော်ပဲမှားသလား (1)
ငရဲက ဘယ်မှာလဲ???? (1)
ဆရာတော်ဘုရားများ၏ စကားဝိုင်း (2)
တတ်သယောင် မှတ်သယောင် (2)
တိရစ္ဆာန်လား လူလား (1)
ဒီမိုဂတုံးများ သိနိုင်စေရန် (1)
နအဖနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတူတူပဲ (1)
ပိဋကတ် သိုင်းကျမ်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံ (1)
ပိဋကတ်သိုင်းကျမ်း ရောက်လာပုံ (1)
ဖန်ဆင်းရှင်အယူအဆနှင့် သဘာဝအယူအဆ (1)
ဖာသယ်ပါးစပ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ (1)
ဗုဒ္ဓဘာသာစစ် မစစ်စမ်းသပ်နည်း (1)
ဘယ်နားမှာလဲ မြင့် မိုရ်တောင် (1)
ဘုန်းကြီး အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေး (3)
ဘုရားတော့ မဖြစ်နိူင် ဘီလူးပဲ ဖြစ်ရမယ် (1)
ဘုရားနှင့် ကုလားမရောစေနဲ့ (1)
မည်သူစကားကို မှတ်ယူရမည်နည်း.. (1)
မယုံဘူးဆိုရင် ဆဲမည် (1)
မယုံလျှင်ဆဲခံရမည်အတူတူ ယုံလိုက်နော် (1)
မဟတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ (1)
မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ (67)
ရင်ထဲက စကားစုများ (1)
ရွှီးဗျို့  ရွှီးရွှီး (1)
လမ်းသရဲလား ဘုန်းကြီးလား (1)
လုပ်တာမဟုတ် မဟုတ်တာလုပ် (1)
လူသတ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပွားအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ (1)
လူသတ်ခိုင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ (1)
လပေါ်မှာ ပေါ်တဲ့ အရိပ်က ယုန်ရုပ်တဲ့ (1)
သာသနာ့စောင့်နတ်တွေကို ဂွင်ကျော်တဲ့ ဂတုံးများ (1)
သိုင်းရူး ဘုန်းကြီး (1)
အပြန်အလှန်ရိုသေ တတ်ခြင်း (1)
အရှေ့တောင်အာရှသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန်ပွားလာပုံ (1)
ဂေါတာမ၏ မသိခြင်း အကြောင်းအ၇ာ (1)
ဂေါတာမက လီယိုနာဒိုလား ဂိုဒင်းဖစ်လား (1)
ဂေါတာမဆိုတာ ဘယ်သူလဲ (1)
ဂေါတာမဆုတောင်း နေသည် (1)
ဒေးဘစ်ကော်ပါဖီးတောင် လိမ်မစားဘူး (1)
ပေးပို့သူနဲ့ စာရေးသူပြောချင်သော စကားအချို့  (1)
မေးခွန်းလေး ဆယ်ခုထဲပါ (1)
မေတ္တာရှင်သို့ ဆုံးမစာ (1)
ရောဂါသည်လေး ဂေါတာမ (1)
လောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း နိုင်သည့်ဘက်က လောင်းပါ (1)
လေတွေ နည်းနည်းလျော့ (1)
ဟေ့ ဟေ့ သူညာနေပြီ (1)
မိမိဘာသာရဲ့ မြင့်မြတ်မူကို ဖော်ပြချင်းလျှင် ဆွေးနွေးကြပါ.
ရှင်ဂေါတာမသည် မိန်းမအမျာကြီး ယူသော အကုသိုလ်ကြောင့် နောက်ဘဝ မိန်းမလျာဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံလျှင် ဆဲကြ!!!!
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် စစ်အစိုးရနှင့် ဘုန်းကြီးများကိုသာ ကြီးပွားချမ်းသာအောင် ပြုလုပ်ပေးနေသော ဘာသာတခုသာဖြစ်သည်. လူအများ ကောင်းစားရေးကို ပြုလုပ်ပေးနိူင်စွမ်းမရှိပါ.
ဗုဒ္ဓဘာသာ ပျောက်မှသာလျှင် မြန်မာနိူ်င်ငံကြီး တိုးတက်မည်
မြန်မာနိူင်ငံအား အမှန်တကယ်တိုးတက် စေချင်ရင် မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဒီမဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးပါ.. သို့မှသာလျှင် အကျွန်ုပ်တို့ နိူ်င်ငံ အမှန်တကယ် တိုးတက်မည်... ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့် ဒီအစိုးရ အာဏာရှည်တာ ဒီအစိုးရကလည်း ဒီဘာသာကို တည်တံ့အောင် လုပ်နေတာ ဒါကြောင့် နအဖအစိုးရနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာအတူတူပဲ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီပဲ..
သဘာဝက ဖြစ်လာတယ်လို့ လက်ခံရင် နိဗ္ဗာန်မလို ငရဲမရှိ
သဘာဝလို့ သတ်မှတ်ရင် ဘာလို့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ရှိဖို့လိုအုံးမလဲ အချိန်တန်မွေးပြီး အချိန်တန်သေရမှာ ဘာလို့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကို မျှော်ရည်မှန်းဆ နေကြတာလဲ သဘာဝက ဖြစ်လာတယ်လို့ လက်ခံရင် နိဗ္ဗာန်မလို့ ငရဲမရှိ မွေးပြီးရင် သေရမယ် ဒါပဲ ဒါမှသာလျှင် သဘာဝက ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရမယ် အကုန်ဖြစ်လာတာကြတော့ သဘာဝ သေခါနီးမှ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ လိုအုံးမလား????
အယူဝါဒများစွာရှိသည့်အထဲမှ မမှန်မကန်သော အယူဝါဒကို မုန်းတီးပြီး မှန်ကန်သော အယူဝါဒကိုသာ လက်ခံသူ။ အထူးသဖြင့် လူလူချင်း လိမ်စားသော ဂတုံးဘုန်းကြီးများကို မုန်းသူ ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်မူအား ရွံမုန်းသူ
please donate for them!!!!!
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ကျွန်တော်၏ ကဗျာ
ကုလားဟုခေါ်လျှင် မကြိုက်ပါ ကိုးကွယ်တာက ကုလားပါ သိုင်းကျမ်းဝတ္တူုခေါ်လျှင် မကြိုက်ပါ ပြင်နေရတာ အခေါက်ပေါင်း မနည်းပါ ခေတ်တိုးတက်လို့ ကျမ်းကလွဲ ပြင်ကြစမ်းဟဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်း။
ကုလားဟုခေါ်လျှင် မကြိုက်ပါ ကိုးကွယ်တာက ကုလားပါ သိုင်းကျမ်းဝတ္တူုခေါ်လျှင် မကြိုက်ပါ ပြင်နေရတာ အခေါက်ပေါင်း မနည်းပါ ခေတ်တိုးတက်လို့ ကျမ်းကလွဲ ပြင်ကြစမ်းဟဲ့ ပိဋကတ်ကျမ်း။
ဒါတွေအတွက် ဆောက်လုပ်ရန် မလှူကြပါနဲ့
Don`t donate to them because they are liars and lazy.
ခင်ဗျားတို့ အဖြေအား တင်ပေးမယ် လောလောဆယ် နှစ်ရက်အ...
စာရေးသူကိုယ်တိုင်ပင် သိပ္ပံအား အပြည်အ၀မှန်ကန်သည့်ဟု...
ဗုဒ္ဓဂေါတာမ ၏ အဟောအပြော (၄)
ဗုဒ္ဓဂေါတာမ ၏ အဟောအပြော (၃)
ဗုဒ္ဓဂေါတာမ ၏ အဟောအပြော (၂)
ဗုဒ္ဓဂေါတာမ ၏ အဟောအပြော (၁)
မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁၁)
မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၈)
မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၇)
မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၆)
မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၅)
မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၃)
မင်းကိုယ်တိုင်အရင် လယ်ထဲဆင်းပီ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် ကောက်စိုက်လိုက်အုံး စပါးကိုဆန်ဖြစ်အောင် ကြိတ်လိုက်အုံး ဆန်ကို မင်းစားဖို့ ထမင်းထချက်လိုက်အုံး ပီးမှဒီစကားပြော အဆင်သင့်စား ဒူးနန့်ပီ ဒီစကားမပြောနဲ့
Copyright © ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်. All rights reserved